Ngwọta Sistemụ Nchekwa Ike, Ndị na-emepụta Ngwọta Sistemụ Nchekwa Ike nke China, Ndị na-ebubata, Ụlọ ọrụ - HNAC Technology Co., Ltd.
>lọ>Onye na-eweta ngwaahịa>Ngwọta Sistemụ Nchekwa Ike
HNAC nwere ike ịnye ngwaahịa nchekwa ike gụnyere igwe agbakwunyere ngwa anya, ihe ntụgharị nchekwa ike na nchekwa ụdị igbe:
1. Ngwa ngwa nchekwa ngwa ngwa agbakwunyere igwe: Igwe eji arụ ọrụ nchekwa ngwa anya bụ ngwaọrụ ejikọrọ na nhazi fotovoltaic, usoro batrị na grid (na / ma ọ bụ ibu) iji ghọta ngbanwe ike eletrik. Ọ nwere ike ijikwa usoro ịwepu fotovoltaic na usoro nchaji na ịchaji batrị. Na-eme ntụgharị AC-DC, ọ nwere ike ịnye ibu AC ozugbo na-enweghị grid ọkụ.
2. Ihe ntụgharị nchekwa ike: N'ime usoro nchekwa ike nke electrochemistry, nke bụ ngwaọrụ ejikọrọ n'etiti usoro batrị na grid (na / ma ọ bụ ibu) iji ghọta ntụgharị ụzọ abụọ nke ike eletrik. Ọ nwere ike ijikwa usoro ịchaji na ịchaji batrị, ma mee ntụgharị AC-DC. Ọ nwekwara ike na-enye ike ozugbo na ibu AC.
Maka ngwaọrụ abụọ a dị n'elu, enwere ike itinye obere ngwaahịa nchekwa ume na ọnọdụ dị ka ọkụ ọkụ ụlọ, ọkụ ọkụ ubi, na ọdụ nkwurịta okwu, na nnukwu na ọkara-sized ike nchekwa ngwaahịa nwere ike tinye n'ọnọdụ dị ka ọgbọ-n'akụkụ ike. nchekwa, nchekwa ike akụkụ grid, yana nchekwa ike microgrid.
3. Igbe ụdị ike nchekwa: N'ime nzube nke ngwaahịa nkwalite na ngwa, anọ PCS ọkọlọtọ ngwaahịa na akpa e mepụtara, anọ PCS booster integrated ụlọ ọkọlọtọ ngwaahịa, na ndị ọzọ PCS igbe ụdị nchekwa ngwaahịa na igbe-ụdị ike nchekwa usoro. nwere ike ahaziri na ịzụlite. Enwere ike ịhazi usoro nchekwa ike ike dị ka mkpa dị iche iche nke ndị ọrụ si dị. Ọ nwere ike imezu ihe achọrọ nke ọnọdụ dị iche iche yana ikike dị iche iche dị ka ịkpụcha elu kacha elu/mgbanwe ugboro ugboro, sistemụ micro-grid nwere ọtụtụ ike, yana inye nkwado ndabere ngwa ngwa.
Njiri mara nke isi atọ nke ngwaahịa nchekwa ike gụnyere igwe agbakwunyere nchekwa anya, ihe nchekwa nchekwa ike na nchekwa ụdị igbe:
1. Ngwa igwe agbakwunyere nchekwa anya:
A. Ngwọta agbakwunyere na-akwado ịnweta ibu, batrị, grids ike, ndị na-emepụta diesel, na fotovoltaics;
B. Integrated EMS ọrụ, ike ọkọnọ dị mma ma kwụsie ike, na itinye n'ọrụ nke ọhụrụ ume na-maximized;
C. Ngbanwe na-enweghị nkebi n'etiti steeti on-grid na off-grid, ọkọnọ nke ibu anaghị akwụsị akwụsị;
D. Ọrụ nchekwa zuru oke iji kpuchido igwe na batrị niile;
E. Nkwado na-agbanwe agbanwe maka batrị lithium na batrị lead-acid
F. Enwere ike ịgbasa onye na-ahụ maka fotovoltaic iji kwado nhazi mgbanwe nke ikike fotovoltaic
2. Ihe ntụgharị nchekwa ike:
A. Site na ọgụgụ isi reactive ike akwụ ụgwọ na kwekọrọ ekwekọ ọrụ, n'ụzọ dị irè melite àgwà nke ike okporo;
B. Na nchebe agwaetiti na obere voltaji na-agba ịnyịnya site na ọrụ (nwere ike ịtọ);
C. ọgụgụ isi na-aga n'ihu na azụ ọrụ iji melite usoro ntụkwasị obi;
D. DSP imewe na-achọpụta njikwa dijitalụ zuru oke nke modul nchekwa nchekwa ike;
E. Ọtụtụ nchekwa nchekwa, AC na DC n'elu na n'okpuru nchebe voltaji, nchebe sekit dị mkpirikpi;
F. Nabata teknụzụ mgbazi ihe na-arụ ọrụ ike dị elu iji belata ndabichi nke harmonics na grid ike;
G. Ọ nwere ikike ibu nke ọkara-ebili mmiri yana ezigbo ngbanwe ibu.
3. Ụdị igbe nchekwa nchekwa ike:
A. Nhazi nhazi iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa;
B. usoro nhazi usoro BMS nke ọkwa atọ, nchekwa na ntụkwasị obi;
C. Njikọ usoro dị elu, usoro batrị agbakwunyere, PCS, usoro njikwa ike, usoro nchịkwa okpomọkụ, usoro nchebe ọkụ, usoro nchịkwa ohere, wdg;
D. Gụnyere ụdị dịpụrụ adịpụ na ụdị na-abụghị nke dịpụrụ adịpụ;
E. Millisecond mgbanwe nwere ike iji dị ka nkwado ndabere maka akụrụngwa dị mkpa;
F. Ọ nwere nkwurịta okwu zuru oke, nlekota oru, njikwa, njikwa, ịdọ aka ná ntị mbụ na ọrụ nchebe, ogologo oge na-aga n'ihu na ọrụ nchekwa, nchọpụta nke ọnọdụ ọrụ usoro site na kọmputa onye ọbịa, ikike nyocha data zuru ezu, na ọrụ ọkụ ọkụ mberede.
Turbine Inlet Valve nke Butterfly Valve, Spherical Valve na Ọnụ Ụzọ Ámá
Sistemụ Nlebaanya na Sistemụ Nchekwa
Mgbanwe Ebe Mpụga (Ndụ ọdụ)
Ultrasonic Mmiri Mita